မှားယွင်းတတ်သည့် သဒ္ဒါနှင့် ဝေါဟာရအသုံးအနှုန်းများ - Myanmar Network
မှားယွင်းတတ်သည့် သဒ္ဒါနှင့် ဝေါဟာရအသုံးအနှုန်းများ
Posted by Myo Myint Kyaw on December 3, 2011 at 9:07 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ဝေါဟာရစကားလုံးတစ်လုံးကို ၀ါကျများမှာ ထည့်သွင်းရေးသားတဲ့အခါ အဲ့ဒီဝေါဟာရ ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက် (Function) ကိုခွဲခွဲခြားခြားသိရှိနားလည်ဖို့လိုပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ အဲ့ဒီစကားလုံးရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကိုလည်း တိတိကျကျနားလည်ဖို့လိုပါတယ်၊ ဒါမှသာ မှန်ကန်တဲ့ဝါကျတည်ဆောက်ပုံနဲ့အသုံးအနှုန်းကိုရေးသားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ မကြာခဏဆိုသလို မှားယွင်းသုံးစွဲတတ်တဲ့ဝေါဟာရစကားလုံးတွေကိုဆက်ပြီး လေ့လာဖို့ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
Alternative and alternate
ပေးထားတဲ့စကားလုံးနှစ်လုံးဟာ စာလုံးပေါင်းခြင်း ဆင်တူနေတာကြောင့် အဓိပ္ပါယ်ကွဲပြားမှုကို သတိထားကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။
Alternate ဟာ နာမ၀ိသေသနစကားလုံးဖြစ်ပြီး (နှစ်ခု၊နှစ်ရပ်) တစ်ခုခြားတစ်ထပ်စီ၊ တစ်ကန့်စီဖြစ်သော၊ တစ်လှည့်စီဖြစ်သော လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။
He only comes to work on alternate days. (သူအလုပ်ကို တစ်ရက်ခြားစီ လာဆင်းတယ်)
Alternative ကတော့ နာမ၀ိသေသနာလိုရော၊ နာမ်လိုရော သုံးနိုင်ပါတယ်.။ နာမ၀ိသေသန ဆိုရင် “အခြားသော၊ သမားရိုကျမဟုတ်သော” လို့အဓိပ္ပါယ်ရပြီး နာမ်ဆိုရင် “အခြားနည်းလမ်း၊ ရွေးချယ်စရာ” လို့ဆိုလိုပါတယ်။ အောက်မှာပေးထားတဲ့ ဥပမာဝါကျများကို လေ့လာကြည့်ပါဦး။
We will make an alternative arrangement if these plans don’t suit you. (ဒီအစီအစဉ်တွေဟာ မင်းနဲ့မကိုက်ညီဘူးဆိုရင် အခြားအစီအစဉ်တွေ ငါတို့လုပ်ပေးမယ်)
I had to go. There was no alternative.
စကားလုံးနှစ်လုံးရဲ့အဓိပ္ပါယ်က တူတူပဲလို့ ထင်စရာရှိတယ်။ တကယ်တော့မတူပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုစကားလုံးမျိုးသုံးတဲ့အခါ သတိထားသုံးဖို့လိုအပ်ပါတယ်၊ အဓိပ္ပါယ်ကိုလည်း တိတိကျကျသိရ ပါမယ်။
Altogether ကို “လုံးဝ၊အားလုံး၊အပြည့်အ၀၊လုံးလုံးလျားလျား၊အားလုံးပေါင်း၊ အားလုံးခြုံငုံလိုက်သော်” စသည့် ဖြင့် အဓိပ္ပါယ်တွေရှိပါတယ်။ သူ့ရဲ့ Function က ကြိယာဝိသေသန စကားလုံးပါ။
I don’t altogether agree. (ကျနေ်ာလုံးဝသဘောမတူဘူး)
It is altogether wrong to ill-treat animals. ( တိရစ္ဆာန်တွေကို မညှာမတာ ပြုမူတာဟာ လုံးဝမှားယွင်းတယ်)
All together ကတော့ “တစ်ယောက်ချင်းဆီ၊ တစ်ခုချင်းစီ ပါဝင်တဲ့ အားလုံးစုစုပေါင်းအရေအတွက်" ကိုဆိုလိုတာပါ။ ဥပမာဝါကို ဖတ်ကြည့်လိုက်ရင် အဓိပ္ပါယ်ရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်။
They all went out together. (သူတို့အားလုံးအပြင်ကို သွားခဲ့ကြတယ်)
She put the glasses all together in the sink. ( သူ(မ)ဟာ ဖန်ခွက်တွေအားလုံးကို ပန်းကန်ဆေးကန်ထဲ ကို ထည့်ထားလိုက်တယ်)
Permalink Reply by Aung Bo Bo on December 4, 2011 at 16:02
Permalink Reply by tun aye on December 4, 2011 at 16:06
Permalink Reply by saw gerald on December 4, 2011 at 17:00
Permalink Reply by Ratan Biswas on December 4, 2011 at 18:51
Permalink Reply by Victor Hugo on December 4, 2011 at 21:54
Permalink Reply by Htun Htun on December 4, 2011 at 22:29
Permalink Reply by kyaw kyaw aung on December 4, 2011 at 22:39
Permalink Reply by june on December 5, 2011 at 9:10
Permalink Reply by Nandar on December 5, 2011 at 10:10
Permalink Reply by Aung Zin Latt on December 5, 2011 at 13:46
Permalink Reply by dearjadeland on December 5, 2011 at 16:14
Permalink Reply by ဖိုးသာထူး on December 6, 2011 at 11:13